musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » FAA inofuratira DRM chigaro chemasimba kwegore rechitatu
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • chengetedzo • Technology • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • USA Kuputsa Nhau
Vapfuuri vakura uye vakuru, zvigaro zvinoramba zvichidzikira, ndege dzakazara, mabhegi anotakurwa anounzwa mundege, uye iyo FAA inoramba ichibvumidza vagadziri vendege kuvimba nedata rekare, fungidziro, uye mifanidzo pane dhata nyowani kana kuitisa miedzo mitsva.
Iyo FAA inobata mhino yayo kuCongress uye vafambi zuva rega rega inoramba kuita pane izvi zviviri zvakakosha zvekuchengetedza nendege nyaya.
FlyersRights.org iri kuronga kuendesa mutsva wekutonga chikumbiro kana iyo FAA ikaramba kuita munguva pfupi.
Kunze kwekubuda kwechimbichimbi makumi mana nematatu kwakatariswa neFAA, imwe chete yakaitwa padanho rechimakumi maviri nemasere.
Faa chiito pane zviyero zvechigaro uye kubviswa kwechimbichimbi kwakava makore maviri kubva musi weChipiri, Gumiguru 5, 2021, uye iyo FAA haina kuratidza humbowo hwekufambira mberi pane chero nyaya.
Congress yakapasa iyo Faa Reauthorization Act muna Gumiguru 5, 2018. Mutemo waida kuti FAA igadzire zvigaro zvepasi uye iongorore zviyero zvekubuda nechimbichimbi naOctober 5, 2019. taura kuCongress kana kuruzhinji. Chirevo chacho chaive nemazita makumi maviri nematatu ekuvandudza nekuvandudza maitiro ekuburitsa evacuation.
"The Faa iri kugunzva mhino dzayo kuCongress uye vafambi zuva rega rega inoramba kuita izvi zviviri zvakakosha nyaya dzekuchengetedza nendege, "akatsanangura Paul Hudson, Mutungamiriri FlyersRights.org. “FAA inoda kubata kusvika panguva. Vapfuuri vakura uye vakuru, zvigaro zvinoramba zvichidzikira, ndege dzakazara, mabhegi anotakurwa anounzwa mundege, uye iyo FAA inoramba ichibvumidza vagadziri vendege kuvimba nedata rekare, fungidziro, uye mifanidzo pane dhata nyowani kana kuitisa miedzo mitsva. ”
FlyersRights.org iri kuronga kuendesa nyowani yekuita mutemo chikumbiro kana iyo FAA ikaramba kuita nekukurumidza. Chikumbiro chayo che2015 chekutonga, chakanzi "Nyaya yeIye Anoshamisa Anodzikira Seti Yendege" neDC Circuit Dare rekukwirira, yakabatsira kupenya mwenje wekusaita kweFAA uye yechinyakare zviyero.
MunaGunyana 2020, iro Dhipatimendi Rekutakura Hofisi yeInspector General (OIG) rakaburitsa gwaro rinotsanangura zvikanganiso zvakawanda muFAA's emergency evacuation evatation uye kuyedza maitiro. Sezvineiwo, iyo OIG yakaratidza kuti iyo Faa vakatsausa FlyersRights.org muna 2018 apo, vachiramba chikumbiro chekutonga kechipiri, iyo FAA yakati yaive yatarisira kuratidzira kwakawanda kwekubuda panzvimbo inokwana masendimita makumi maviri nemasere. Iyo FAA yaisanganisira mavhidhiyo matatu uye yakazivisa kuti akaitiswa pa28 inches. Asi muchokwadi, kunze kwekubuda kwechimbichimbi makumi mana nematatu kwakatariswa neFAA, imwe chete yakaitwa padanho rechimakumi maviri nemasere. Kumwe kuratidzira kwaikwirana kusvika pamasendimita makumi matatu nemasere, nepo gumi nematanhatu pane makumi mana nematatu ratidziro isina kana chirevo chekukwirisa chigaro, hupamhi, kana saizi zvachose.
Brits vanoti nharaunda nekuchengetedza kwakakosha...
Utah, Hawaii, Idaho, Kentucky, New Mexico: Akanyanya ...
Saudi Arabia Inodyara Mune Ramangwana Ikozvino ne100+ Tsika...
Spain icharamba ichipisa muna 2022
Ndekupi uye Rini Kuita Vepamusoro VIP paWorld Travel Market...